AMBONY ny ANKAMAROAN'NY SHINOA MALAZA, ny FIARAHANA amin'ny FAMPIHARANA Fa ny Mandarin
AMBONY ny ANKAMAROAN’NY SHINOA MALAZA, ny FIARAHANA amin’ny FAMPIHARANA Fa ny Mandarin
Ny rehetra ny Shinoa ny Fiarahana amin’ny Fampiharana, ny malaza indrindra amin’ireo dia Tanta. Izany no matetika oharina amin’ny Fahazoana ny fomba fiasan’izy.
Ireo mpampiasa dia afaka tanana mameno ny mombamomba ny famaritana sy ny tombontsoa tahaka ny tsy misy automated fanangonana ny antontan-kevitra mpampiasa ny fomba Facebook miasa. Raha vao nisoratra anarana, afaka manomboka mampiasa ny fampiharana. Ianao dia ho aseho amin’ny olona iray s sary sy ny mombamomba azy sy ny swipe havia na ny havanana mba hifidy izany olona izany, na mba hanafoanana azy azy. Afaka manomboka ny resaka amin’ny olona izany raha toa ka samy mifidy ny tsirairay. Maro ny tanora sy ny olona an-tanàn-dehibe ny fampiasana ny Tanta, izay manana tsara tarehy be mpampiasa fototra sy mora ampiasaina. Na izany aza, misy afa-tsy vitsivitsy tena resaka sy ny fivoriana raha oharina ny isan’ny lalao. Amin’ny farany, izany niakatra ho any aminareo rehetra sy ny lalao na maka izany virtoaly daty ny zava-misy.
Miverina any an-tampon’ny tsy ny babo-antso fampiharana intsony
Afaka mampiasa izany mba hitady olona iray izay manana ilay tombontsoa mitovy toy ny anao. Momo no tena voalohany mampiaraka fampiharana izay manarona ny rehetra Fanjakana Afovoany. Izany dia be no nahita azy ho toy ny tsara indrindra fampiharana ny babo-fiantsoana nandritra ny fotoana kelikely. Mba manala ny ity ratsy laza, Momo niova mihitsy avy amin’ny fiarahana mifantoka amin’ny fampiharana ny tombontsoa ara-tsosialy mifototra amin’ny tambajotra iray. Amin’ny maha voalohany sy lehibe indrindra ny fiarahana amin’ny fampiharana, ny olona mbola mihevitra manokana io fampiharana rehefa mahita vaovao ny olona. Na izany aza, ny fampiharana dia tsy mora ampiasaina noho ny maro add-amin’ny endri-javatra izay mety ho mampisafotofoto. Azonao atao ny hitady namana vaovao ao amin’ny faritra misy anao (ao anatin’ny iray nipoaka), play ny lalao mini-na hiditra ny mpampiasa-niteraka vondrona. Momo manana miha-ambony ny isan’ny vahiny mpampiasa, izay midika hoe afaka mampiasa fampiharana ity any amin’ny firenena maro isan-karazany manerana izao tontolo izao. Ny lalao amin’ny sarobidy Shinoa kilasy, azo jerena amin’ny aterineto, ao Beijing na Shanghai. Tao anatin’ny herinandro dia afaka hahafehy Velona Sinoa ary mitondra fototra resaka amin’ny vahoaka Shinoa. Amin’ny fampiharana ity, ny lehilahy matetika no mba soso-kevitra ny sakafo hariva daty sy miandry ho an’ny vehivavy ny sonia ho an’ny ny sakafo hariva.
Izy ireo dia afaka mifidy izay vehivavy handray ny sakafo hariva
Na izany aza, ny s lasa miha malaza ho an’ny vehivavy mba hanatitra ny sakafo hariva daty koa. Ny s fomba lehibe mba hanorina fifandraisana vaovao rehefa afaka volana ny daty ny fifantenana ny sakafo hariva-toerana sy hahafantatra ny tsirairay raha fankafizana ny sakafo. Ny lalao amin’ny sarobidy Shinoa kilasy, azo jerena amin’ny aterineto, ao Beijing na Shanghai. Tao anatin’ny herinandro dia afaka hahafehy Velona Sinoa ary mitondra fototra resaka amin’ny vahoaka Shinoa. Teny filamatra dia ny iray tsy manam-paharoa kokoa Shinoa mampiaraka apps. Fitepon’ny fo dia rindrambaiko natao ho an’ny mpianatra amin’ny oniversite. Rehetra ireo mpiserasera mba hametraka ny rafi-panjakana ny taratasy fanamarinana mba ho afaka hampiasa ny rindrambaiko. Izany dia tena hentitra ny rafitra fanivanana mampiseho Jindong s tapa-kevitra mba ahitana ny tena tsara indrindra ny tanora sy ny olona nahita fianarana.
Jindong dia tsy indostrialy mampiaraka fampiharana
Araka izy ireo hanome anao ny lalao roa andro, dia mitandrina miadana haingana izay mety ho tsara na ratsy, arakaraka izay tadiavinao. Toy izany koa fa Tanta miasa, Jintao dia manome fahafahana anao mba mifanena amin’ny olona. Ireo mpampiasa koa dia mila tanana ampidiro ny mombamomba azy sy ny zavatra mahaliana. Na izany aza, ny tena maha samy hafa avy Tanta dia izay efa tany am-boalohany ny mpampiasa interface tsara ny famolavolana fa tsy ny ara-bakiteny kopia Tinder s famolavolana sy fampiharana izany dia t maintsy ho maro ny endri-javatra toy ny Tanta toy ny lavitra na ny taona mifototra amin’ny sivana. Misy ihany koa ny vitsy kokoa ny tombontsoa safidy sy ny tsy mpampiasa amin’ny fampiharana izany. Misy manana izany, ireo no tena Shinoa Mampiaraka Fampiharana ampiasaina ao amin’ny tanibe Shina amin’izao fotoana izao. Raha manana be atao asa fandaharam-potoana sy tsy be loatra ny fotoana ho an’ny fivoriana vaovao ny olona, dia tokony hiezaka ny sasany amin’ireo Shinoa Mampiaraka ny Fampiharana sy ny fomba miasa
← Mampiaraka ao Shina sy Ny Fiakaran'ny 'Mitanjaka Fanambadiana'
Shina Lahatsary Mampiaraka - lahatsary Rehetra chats iray →